Father’s Day: Suniel Shetty Iyo Gabadhiisa Athiya Shetty Oo Arimo U Gaar Ah Saxaafada La Wadaageen | Filimside –	Wednesday, July 26th, 2017	" alt="Filimside - logo" border="0" />
Father’s Day: Suniel Shetty Iyo Gabadhiisa Athiya Shetty Oo Arimo U Gaar Ah Saxaafada La Wadaageen
Jun 18, 2017 - jawaab	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: June 18, 2017:
Ayadoo maanta loo dabaal dagayo maalinta aabaha aduunka (Father’s Day) waxaa dhacday in ruug cadaa Suniel Shetty iyo gabadhiisa Athiya Shetty saxaafada la fal galeen ugana sir baxeen arimo noloshooda u gaar ah.
Suniel iyo gabadhiisa Athiya oo iyadana Bollywood-ka ka tirsan waxaa loo maleeyaa labo saxiibo ah sida ay u kaftamayaan iyo kalsoonida ka dhaxeyso.
Suniel iyo Athiya waxaa la weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin?
Athiya waxay ku jawaabtay: Waa shaqsi aad iiga wanaagsan, waxaana i saaran cadaadis xoogan madaama qof walbo igu dhahaayo “U wanaagsanaaw sida aabahaa oo kale” aniga ma aaminsani inaan sidiisa camal noqon karo
Suniel wuxuu ku jawaabay: Ma jirto wax aan ku kala duwanahay, waxaan nahay aabo iyo gabadhiisa saaxiibo ah sidoo kalena isku shaqo ah wax walbana isla fahmi karaan.
Athiya waxaa la weydiiyay qofka ay saaxiib dhow la tahay aabaheed ama hooyadeed Mana Shetty?
Athiya waxay ku jawaabtay: Xaalada wey kala duwan tahay markii aan yaraa hooyo ayaan aad ugu dhawaa, maantana aabo ayaan saaxiib dhow nahay oo aan xitaa waqti walbo isla qaadanaa madaama aan isku shaqo qabano.
Suniel waxaa la weydiiyay inuu si isku mid ah ula dhaqmo Athiya iyo wiilkiisa Ahan?
Suniel Shetty wuxuu ku jawaabay “Haa dhab ahaantii isku mid ayay ii yihiin waana wada jeclahay.
Laakiin Athiya ayaa hadalka ka daftay waxayna tiri “Maya isku mid uma nihin waayo Ahan halkii uu doono ayuu aadi jiray anigana xili walbo wuu isoo wacaa mana jeclo inaan ka fogaado ilaa haatan.
Athiya waxaa la weydiiyay in waligeed ay aabaheed been u sheegtay?
Waxay ku jawaabtay “Siweyn ayuu ii aaminsan yahay anigana waligey waxba kama diidin, marka kaliya ee aan qalad ka galay waxay ahayd anigoo 16-jir ah, inaan aaday goob lagu caweeyo habeenkii xili dambe mana aanan u sheegin!
Suniel ayaa hadalka ka dafay wuxuuna yiri “Waxay ahayd habeen sanad cusub soo galaayay waxaan u sheegay Athiya inay aadi karto meeshii ay doonto marka laga reebo goobaha jaamka lagu cayaaro ama lagu caweeyo, waayo saxaafada anaga ayay indha nagu hayaan.
Hadii ay halkaas ku arkaan waxay ka qaadayaan sawir kadibna subaxdii waxay ciwaan ka dhigayaan “Suniel Shetty gabadhiisa xalay goob caan ah oo lagu caweeyo ayay joogtay ayadoo kaligeed ah!”
Waxaana dhacday wixii aan niyada ku haayay waayo Athiya inan yar ayay ahayd saaxiibadeeda ayay raacday, laakiin booliska ayaa qabteen iyadan saaxiibadeeda madaama xili dambe ay socdeen ayagoo da’dooda ka yar tahay 18-sano oo aan qaan gaar ahayn!
Athiya ayaa hadalka daftay waxay tiri “Isla markii aan booliska gacanta ku galay anigoo aabo been u sheegay hadana qofka ugu horeeyay ee aan wacay asiga ayuu ahaa!
Athiya waxaa la weydiiyay in aabaheed ka carooday?
Athiya waxay ku jawaabtay “Aad ayuu u naxay ee igama uusan caroonin madaama ay ahayd markii ugu horeesay qof qoyskeena ka mid ah sharciga qalad ka galo, wuxuuna uu sameeyay caawinaad deg deg ah si aan kaga bad baado wasaqdii aan dhexda ka galay.
Wixii habeenkaas ka dambeeyay ma dhicin inaan kasoo daaho guriga, xitaa maantadan la joogo banaanka ma aadi hadii uusan aabo, hooyo ama Ahan ila soconin.
Suniel waxaa la weydiiyay dareenkiisa marka gabadhiisa ay ku dhahday inay atirisho noqoto?
Wuxuu ku jawaabay “Athiya ma ahayn qof dal kale ku noolaa ee agteyda ayay kusoo kortay sidaa darteed ayadoo caruur ah ayay riyadeeda ila wadaagi jirtay inay atirisho noqoto, xitaa goobaha aan filimada ku duubayo marka aan geeyo aad ayay u farxi jirtay, marka go’aankii ay fanka kusoo gashay waa mid aan si wadajir ah ugu garab taagneyn.
Athiya waxa la weydiiyay waxa ay jeceshahay inay aabaheed ka hesho oo dabcigeeda ka maqan?
Waxayna ku jawaabtay “Waxaan jeclaan lahaa dulqaadka uu leeyahay aabo inaan lahaado, laakiin dabciga isma badalo.
Suniel isagana wuxuu ku jawaabay “Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo qof fir fircoon oo aan saxaafada ka xishoonin waayo xiligii aan dhalin yarada ahaa wey igu adkeyd sida Athiya camal inaan meel fagaaro ah ka hadlo ama fir fircooni dheeraad ah dadka ka dhex muujiyo.
Athiya waxaa la weydiiyay inay guur ku fikirtay iyo sida ay waalidkeeda kaga maarmi karto?
Athiya waxay ku jawaabtay “Guur aaa! Maba rabo aabo inaan ka fogaado waayo wuxuu aaminsan yahay in la’aanteyda uusan noolaan karin!
Suniel ayaa hadalka ka dafay wuxuuna yiri “Aniga iyo xaaskeyga Mana waxa ugu weyn ee aan hada ka fikirno sidoo kalena aan jecelnahay waa inaan awoowe ama ayeeyo noqono, waxaan rabaa Athiya iyo Ahan inay xili hore guursadaan si aan caruurtooda waqti wacan ula qaato.
Athiya ayaa hadalka ka daftay aabaheed waxayna tiri “Alle Ilaahayoow! Marka hore aabo ii soo hel ama ii keen wiilkii aan nolosha la wadaagi lahaa…. Weyna qososhaha kkk kkk.
Fikrada guurka hada qorshaha iiguma jirto waa inaan helaa wiilkii aan nolosha la wadaagi lahaa kadib ayaan qaadan doonaa go’aanka xiga ee ah maku haboon yahay qofkaas inaan aabo baro waayo aabaheey ma bari kari qof kasto oo nolosheyda kusoo biiro kaliya waxaan bari karaa qofka aan aaminsanahay 100% inuu yahay midka nolosheyda u qalmo.
Suniel iyo Athiya waxaa la weydiiyay inay filim isla sameyn doonaan?
Suniel wuxuu ku jawaabay “Waa waxa kaliya ee nolosheyda fanka ka dhiman inaan Athiya shaashada kala soo muuqdo, balse qasab ma ahan inaan filim walbo isla sameyno, kaliya waxaan la sameynaa filim Athiya hogaamiye ka tahay anigana aan door caawiye ah ku leeyahay waayo ma doonayo gabadheyda inaan la tartamo madaama aan nolosheyda fanka soo qaatay.”
Athiya iyadana waxay tiri “Riyooyinka aan Bollywood-ka usoo galay ayay ka mid tahay geesigii aan waligey filimadiisa daawan jiray inaan shaashada kala soo muuqdo.
Markii aan College dhiganaayay saaxiibadeyda siweyn ayay u ogaayeen jaceylka aan aabaheey u qabay xitaa isaga ayaan iska dhig dhigi jiray asigoo Action-madiisa sameenayo sidoo kalena heesihiisa caanka ah Dance-gooda ku cayaarayo, sidaa darteed waa fursada aan raadinaayo inaan hal filim kasoo wada muuqano
Waxaa Aqriyay: 1,109